Laanta Socdaalka Sweden oo ku fashilantay in ay musaafuriso gabar 15-sano jir Soomaali ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa bishii hore ku fashilantay in ay wadanka ka musaafuriyo gabar 15-sano jir Soomaali ah oo la sheegay in ay ka soo jeedo Waqooyiga. Gabadhaan oo Laanta Socdaalka ay ku amartay in ay wadanka uga baxdo muddo 5-bilood gudaheed ah ayaan ka bixin wadanka xiligii loo qabtay, iyadoo markaas dib ay Laanta Socdaalku ku soo roggaan mamnuuc in aysan Sweden dib u soo gali karin, haddii ay ka baxdo wadanka.
Gabadhaan ayaa racfaan ka qaadatay go’aankaas looga mamnuucay in ay Sweden soo gasho, iyadoo ay arintu u gudubtay maxkamada sare ee Socdaalka. Ka dib markii ay eegtay kiiska gabadha, oo la sheegay in ay si wanaagsan ula shaqeysay Laanta Socdaalka balse la waayay cid Waqooyiga Somalia joogta oo qaabili karta, ayaa maxkamadu go’aan ku gaadhay in ay qalad ahayd in laanta Socdaalku ay gabadhaan mamnuuc ku soo roggaan. Waxay maxkamadu sheegtay in Laanta Socdaalku ay ku fashilantay in ay eegto danta caruurta. Sidaa darteed ayay maxkamadu meesha ka saartay go’aanka gabadha looga mamnuucay in ay Sweden ku soo noqoto haddii ay ka baxdo wadanka.
Sharciga mamnuuca soo laabashada (Återreseförbud) ayaa qabanaya qofka lagu amray in uu wadanka iskiis uga baxo balse aan ka bixin wadanka mudadii loo qabtay. Qofkaas ayaa laga mamnuucayaa in uusan dib u soo galin midowga Yurub, haddii la musaafuriyo. Balse arinta gabadhaan ayaa muujinaysa in maxkamadu ay eegtay xaalada gabadha iyo tan ka jirta wadanka Somalia.
In gabadha yar sharciga la siiyay iyo in kale ayaan cadeyn.
Waa kee wadanka ugu fiican aduunka? kaalintee gashay Sweden?